Chitter: Chinja Vatengi muSocial Kugovana Vamiriri veBrand! | Martech Zone
Chitter chirongwa chinokupa mubairo nezvipo zvepachena uye nezvakakosha zvidzikiso zvekutumira mafoto kune ako masocial network. Mabhizinesi anokwanisa kujoina pasina muripo, achigadzira zvinopihwa nevashandisi kuti vawane kuburikidza nepuratifomu. Kuti vagone kudzikinura kupihwa, ivo vanongofanirwa kugovana pikicha inosimudzira kuisirwa kune yavo yemagariro midhiya network.
Chit (tsananguro) - Chipo chakakosha, mukana wekuchengetedza mari, kurudziro, kana coupon rinowanikwa chete paChitter app.
Chitter inzvimbo-based yekutsvaga app inowanikwa pane Android uye iOS. Nekugovana mafoto, mutengi wako zvino anotengesa uye anosimudzira zvigadzirwa zvako, masevhisi, uye zviitiko kwauri. Izvi zvinogona kuwedzera zvinoshamisa kusvika kwako uye kuoneka pane vezvenhau, kudzikisa mari itsva yekutenga vatengi, uye kuwedzera kuchengetedzwa kwevatengi.
Chitter yakasununguka kuti mabhizimusi asayine uye uye zvinongotora maminetsi mashoma kuti umise. Iwe wakasununguka kurodha seakawanda Chits sezvaungade kuoneka pane rako bhizinesi kana masangano Chitter kuratidza mhedzisiro pane nharembozha. Chitter ine premium maficha anoita izvo zvinopihwa zvakarongedzwa neinjini dzekutsvaga, tora mushandisi e-mail kero uye uone analytics yehuwandu hwevatengi vako.
Eric Dye ane hurukuro huru naSeth Knapp, Chief Experience Officer we Chitter, pane iyo Bhizimusi Podcast Network.
Tags: kukurudziratsigirachitterkukurudzira vatengieric dhayikurudzirachitoro kukurudzirachitoro chenhau renhauchitoro kugovana munharaundaseth knappsocial sharing
Google Tsvaga Console Yakatyisidzira Bhurezi mukati Me!
Zvatakaita Kuti tiwedzere Engagement pa Twitter